आयरल्यान्ड - ALinks
आयरल्याण्ड मा लेख
आयरल्याण्ड भिसा आवश्यकताहरू के के हुन्?
नोभेम्बर 22, 2021 मैत्री झा आयरल्याण्ड, भिसा
आयरल्याण्ड यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। आयरल्याण्ड छुट्टी बिताउने ठाउँ हो। प्रत्येक वर्ष धेरै पर्यटक आयरल्याण्ड भ्रमण गर्छन्। मोहरको चट्टान जस्ता प्राकृतिक आश्चर्यहरूले पर्यटकहरूलाई चारैतिरबाट आकर्षित गर्दछ
आयरल्याण्ड मा बैंकहरु
सेप्टेम्बर 17, 2021 शुभम शर्मा बैंक, आयरल्याण्ड, पैसा
आयरल्याण्ड मा बैंकिंग प्रणाली यूनाइटेड किंगडम को एक धेरै समान तरीका मा संचालित छ। परम्परागत केन्द्रीय बैंकिंग प्रकार्यहरु जस्तै वित्तीय नियमन आयरल्याण्ड को केन्द्रीय बैंक (सीबीआई) को हातमा छन्। केन्द्रीय बैंक को
आयरल्यान्डमा शरणको लागि आवेदन दिनुहुन्छ? यहाँ छोटो वर्णन छ !!
12 सक्छ, 2020 शुभम शर्मा आयरल्याण्ड, शरणार्थीहरू
के तपाईं आयरल्यान्डमा बस्नुहुन्छ वा आयरल्यान्डमा शरण लिन चाहानुहुन्छ? त्यहाँ केहि कागजातहरू छन् जुन तपाईले शरणका लागि आवेदन दिंदा बोक्नु पर्छ। एक शरणका लागि मात्र आवेदन दिन सक्दछ यदि तपाईं आयरल्यान्डमा हुनुहुन्छ भने। आयरल्यान्ड हो